ဒေါက်တာသွင်မောင်အေး မှ ဦးဆောင်၍
Rotary Club of Central Yangon နှင့် Headway Myanmar Medical Co.,Ltd မှ
ကူညီထောက်ပံ့ပေး၍ အစာအိမ်ရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ အား
စရိတ်မျှပေးကာ စမ်းသပ်မှုအား ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အစာအိမ်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည့် ၀မ်းဗိုက်နာ၊ ဗိုက်ကယ်၊
မအီမသာ၊ အော့အန်ခြင်းတို့ကို မကြာခဏဆိုသလို (၆)လနှင့် အထက်
ကြာမြှင့်စွာ ခံစားနေရသော လူနာများအား အစာအိမ်ရောဂါပိုး
H.pylori ကူးစက်မှု လေမှုတ်စစ်ဆေးခြင်း(Urea Breath Test)ဖြင့်
ထိုသို့ လာရောက်စမ်းသပ်မှုခံယူခဲ့သော လူနာများ၏ စမ်းသပ်ခ
ငွေကျပ်(၁၀,၀၀၀)အား Headway Myanmar Medical Co.,Ltd. မှ
ကုသိုလ်ဖြစ် စရိတ်မျှပေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သော ဆေးဝါးများကို
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ တစ်ပတ်စာ(၂)ကြိမ် အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
အစာအိမ်ရောဂါပိုးကြောင့် ဘ၀လူနေမှုအခက်အခဲနှင့် အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျနေသူ
ငယ်ရွယ်သူများအတွက် ရေတိုကာလအတွင်း ရောဂါလက္ခဏာသက်သာ၍
ဘ၀နေထိုင်မှုတိုးတက်လာရုံသာမက ရေရှည်ကာလတွင်လည်း အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို
ထို့နောက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ နှင့်
ဒေါက်တာသွင်မောင်အေး တို့တွေ့ဆုံကာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို
သတင်း/ဓါတ်ပုံ - ပြန်ကြားရေးဌာန
အစာအိမျအူလမျးကွောငျး အသညျးရောဂါ အထူးကုသမားတျော ဒေါကျတာသှငျမောငျအေး မှ
ဦးဆောငျ၍ သုခကုသိုလျဖွဈဆေးခနျး၊ Rotary Club of Central Yangon နှငျ့
Headway Myanmar Medical Co.,Ltd. မှ ကူညီထောကျပံ့မညျ့ အစာအိမျရောဂါပိုး
စရိတျမြှပေး စမျးသပျမှုနှငျ့ ကုသမှုမြား ပွုလုပျပေးခဲ့
၂၀၁၉ စကျတငျဘာ (၁၁)
ယနေ့ နံနကျတှငျ နာရေးကူညီမှုအသငျး(ရနျကုနျ)
မှ ဦးဆောငျ၍ Rotary Club of Central Yangon နှငျ့
Headway Myanmar Medical Co.,Ltd မှ ကူညီထောကျပံ့ပေး၍
အစာအိမျရောဂါပိုး ရှိ/မရှိ အား စရိတျမြှပေးကာ
အစာအိမျရောဂါလက်ခဏာမြားဖွဈသညျ့ ဝမျးဗိုကျနာ၊ ဗိုကျကယျ၊ မအီမသာ၊
အော့အနျခွငျးတို့ကို မကွာခဏဆိုသလို (၆)လနှငျ့ အထကျ ကွာမွှငျ့စှာ
ခံစားနရေသော လူနာမြားအား အစာအိမျရောဂါပိုး H.pylori ကူးစကျမှု
လမှေုတျစဈဆေးခွငျး(Urea Breath Test)ဖွငျ့စမျးသပျကုသပေးခဲ့ကွသညျ။
ထိုသို့ လာရောကျစမျးသပျမှုခံယူခဲ့သော လူနာမြား၏ စမျးသပျခ
ငှကေပျြ(၁၀,၀၀၀)အား Headway Myanmar Medical Co.,Ltd.
မှ ကုသိုလျဖွဈ စရိတျမြှပေးခဲ့ပွီး လိုအပျသော ဆေးဝါးမြားကို
သုခကုသိုလျဖွဈဆေးခနျးမှ တဈပတျစာ(၂)ကွိမျ အခမဲ့ထောကျပံ့ပေးခဲ့ကွသညျ။
ဥက်ကဌ ဦးကြျောသူ နှငျ့ အစာအိမျအူလမျးကွောငျး
တို့တှဆေုံ့ကာ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးတိုငျပငျခဲ့ကွသညျ။